The Night Attila ခေါငျးဆောငျရဲ့သေခြင်းကကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်သေ
Attila သည့်ဟွန်၏အသေခံခြင်း၏နက်နဲသောအရာကိုမှမိုက်ကယ်အေ Babcock ရဲ့ဖြေရှင်းချက်။
အဆိုပါည Attila သေဆုံးခဲ့ - Attila ၏လူသတ်မှုအတွက်ဟွန်ဖြေရှင်းခြင်း, မိုက်ကယ်အေ Babcock သက်သေအထောက်အထား Attila သည့်ဟွန်တစ် nosebleed ဒါမှမဟုတ်အရက်-သွေးဆောင် esophageal ကှဲထှကျသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ညဉ့်တွင်မသေခဲ့ဘူးသောသူ၏သီအိုရီကိုထောကျပံ့မညျမြှကရှင်းပြသည်။ အနည်းဆုံးတော့အကူအညီမပေးဘဲမရ။
ဘယ်လိုအတိအကျ Attila သေသမိုင်းဝင်စံချိန်အတွက်မရနိုင်တော့ပါ, ဒါပေမယ့်တစ်မအောင်မြင်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်တစ်ဦးအဖုံး-up,, အခြားစာပေအတွက်အပြိုင်အသေခံမြင်ကွင်းများနှင့်သေအရှက်ခွဲလမ်းပါဝငျသောအရာကိုအပေါ်ရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ်များ၏သဲလွန်စများအကြား, Babcock မှာဗိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာကောက်ချက်ချ Marcian Attila ကိုသတ်မှလုပ်ကြံငှါး၏။
ယင်းစစ်သည်တော် Attila ၏စော်ကားသောသေမင်း၏အစဉ်အလာအကောငျ့ကိုထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ရာစုရေးသားခြင်းသည် Gothic အဘိဓါန်သမိုင်းပညာရှင်ယော်ဒန်မြစ်ထဲကနေလာပါတယ်။ ယော်ဒန်မြစ်, Priscus '' အတွေ့အကြုံကိုအတွက်ပိုလျှံမှမသောက်ခဲ့ဘူးသူတစ်ဦးသတိ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါင်းနှစ်လုံးဟွန်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်အတွေ့အကြုံကိုသူ Attila ရဲ့ခေတ်ပြိုင် Priscus ၏ကြောင်းပေါ် Attila ရဲ့သေခြင်းကသူ့အကောင့် bases ။
သူ Attila နှင့်အတူ shared ဘောဇဉ်၏ Priscus '' ဖော်ပြချက်သူရေးသားခဲ့သည်တစ်ခရီးသွား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Priscus '' ခရီးသွားက၎င်း၏ရေးသားသူထားပြီးသို့မှသာရည်မှန်းချက်စစ်ကြောစီရင်ထားပြီး "ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်အရာအားလုံးကိုတစ်စောင်ယုံကြည်ကိုးစားမှုတိုးချဲ့။ "
Babcock သူ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နှင့်အတူတစ်ဦး propagandist အဖြစ် Priscus ထုတ်ဖော်ပြသပေမယ့်သက်သေအဖြစ်သူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ negate မထားဘူး။ အဆိုပါပြဿနာ Priscus Attila ၏အသေခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားခဲ့ရာကသာတစိတ်တပိုင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ Attila ရဲ့ယူဆရ fratricide ရစ်ဘို့ payback အကြောင်းကိုသဲလွန်စ။
Babcock ရှင်းပြနှင့် Attila ၏လူသတ်မှုများအတွက်အထောက်အထားသူ၏ 17 မှတ်ကို back up ထက်ပိုပါဘူး။
သူလည်း philological စုံထောက်အလုပ်ပြမင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဘွဲ့ရကျောင်းသားအဖြစ်အသက်တာ၏ရငျးနှီးသညျ့ပုံတူဖျော။ ထို့အပြင်သူသည်အလွန်စိတ်ကူးယဉ်မျောက်လွှဲကျော်, အသမ္မာသတိရှိကြလော့ Attila, အချည်းနှီး၏ပုံတူမင်တံ ဧကရာဇ် Valentinian , ထိုအရည်အချင်း "ဒုတိယကွန်" Marcian, နှင့်အကြီးအက "ရောမကနောက်ဆုံး" Aetius ။
Babcock ကိုလည်းနောက်ဆုံးရောမဧကရာဇ်များနှင့် [၏ဖြုတ်ချအောက်ပါရောမမြို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Gothic အဘိဓါန်ညျရှငျဘုရငျတို့အကြား 2-မျိုးဆက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းအမှတ်ရစရာ subplot crafts တဲ့ Romulus Augustulus , Odoacer] ။
ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါည Attila ငါ့စာဖတ်ဘို့အသေခံ - Attila ၏လူသတ်မှုအတွက်ဟွန်ဖြေရှင်းခြင်း, ငါသည် Babcock Attila ၏တစ်ခေတ်တည်း Attila အသတ်ခံခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဆံ့ပြောပါတယ်အဆိုပါဂျာမန်ဒဏ္ဍာရီမသိရပါဘူး။ အနည်းငယ်သောစာမျက်နှာများသို့ဒဏ္ဍာရီခြုံ့ဖို့ Babcock ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုရှိနေသော်လည်း - ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးချို့တဲ့အကြောင်းတရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်စာမျက်နှာများပြီးနောက်, ငါရုတ်တရက်ရှင်းရှင်းရှုပ်ထွေးခဲ့ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဒါဟာပြန်ချည်တက်ကောက်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။
Attila ၏မရဏသည့်ဟွန်အပေါ် Babcock ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်
မိုက်ကယ်အေ Babcock အဆုံးမှာအတူတူအရာအားလုံးကိုချည်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်မနှင့်သူ Attila ရဲ့နိဂုံးကို၏ undetailed ဗားရှင်းလျှင်ဆွဲဆောင်မှုပေးပါသည်။
2010 Kawasaki Z1000 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပစ္စည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှာ Data Sheet များအသုံးပြုခြင်း
အရောင်အသွေးစုံသောဆပ်ပြာပူဖောင်း Make ရန်ကဘယ်လို
Big Brother - ပါးလွှာညီအစျကို
သူတို့ကသင်ကလက်နက်ပြီးနောက်ပျားရည်ပျား Die သလား?
အနီရောင် Supergiant စတားလမ်းထဲကတွင်များမှာ
အဘယ်အရာကို Bunny က Man တံတားအကြောင်းဒါကြောင့်ကြောက်စရာလား
သူမ၏သီချင်း "မီးရှို့ခံရသောအိမ်" အကြောင်းကို cam ဆွေးနွေးပွဲ
ရောမမြို့ 1st Century ဘီစီမှတ်တမ်း
Jagadish Chandra Bose ကို, မော်ဒန်-Day ကို Polymath ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ 4BBB ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ Play လုပ်နည်း
နှင်းလျှောစီး Tattoos နှင့်သိကောင်းစရာများ
De Profundis - ဆာလံ 130 (သို့မဟုတ် 129)
အသေးစိတ်အစီအစဉ် LSAT သင်တန်းများ
"ပျောက်ဆုံးသွားသော" တွင်ဂျယ်ရမီ Bentham
အီတလီကြိယာ conjugation: Vestirsi